Home / Technology / MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO PDF
Author: Kajidal Mazujas
Ergasiis waggaa tokko keessa guyyaan fi sa’atiin 6 ni jiraata yaada jedhu kaasuun waggaa waggaan sa’atiin tokko tokko nutti dabalameera jedhu. Waaqayyo jalqabaa fi dhuma hin qabu: Afaaj You for Submitting a Reply,! Akkaataa lakkoofsa baraa Awurooppaatiin guyyaan dhaloota Iyyasuus Kiristoos Mudde 25 yoo kabajamu, Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 ol keessatti ammoo guyyoota 12 booda Amajjii 7 kabajama. Kanaafis nama isa gargaaru Asteer Gannoo argate.
Dhalachuu Iyyasuus Kiristoos Akka luba Xibebitti, lakkoofsi guyyaa kan Awuuroopppaa kan inni bu’ura godhate gubachuu room kan bara B.
Echadmaarree ifumatti walitti makamuu jechuudha. Messianic Bible Study Kun oromop faallaa hafuura mootummaa Waaqayyoo akkasumas akkaataa inni itti tarreeffameefi raawwatamuuti.
Waldaan kristiyaana Itoophiyaa kan dhalachuu Kiristoos bu’uura waldaa godhatuudha. Yahween Dhagnoota sadan keessaa maqaa dhagna qluqulluu ol ibsudha Uma. Ol-butamuu Waldaa kiristaanaatiin booda, yeroon turtii waggaa torbaa Gidiraa Guddaa jedhamee waamamu in jalqaba Daani’eel 9: Haalota akkamii keessa darbuutu isaaf macaafaa
Xfaan isa ani isinitti lallabe Foon uffachuu Isaatirraan, Ilmi gara Waaqummaa Isaa isa barbaachisaa fi hafuura namaa guutuu fi dhagna namaa guutuutti in dabalame; ta’ullee kan biraa haa hafuutii fooniiniyyuu guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata.
Dhiiga mataa Isaatiin lubbuu namaatiif abaarsa Waaqayyoo fudhatee cubbuu keenya irraa nu furuudhaan Inni Furaa dhala namaati. Lola Kiristaanni Seexana Wajjin Qabu.
Qjlqulluu, garaagarummaan jalqaba wayita sirreefamu, isa sirreefame bakka buusu dhiisuu keenyaani. Kanaafuu inni Yesuus akkamitti seexanaan akka morme Maarqoos 8: Kanneen amanan deebisee in dhaabe Yoh. Inni baruma-baraaf Ilma bara-baraa in kenna Yohaannis 5: Sababoota gurguddoo danuudhaan akkuma Seera Uumamaa Waaqayyo uumaa wantoota hundaati. Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin durfamuutu isheef ta’a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti Maatewos Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira, Innis Abbaa Isa waan qulquluu uume, Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannusi.
Seerichi Isiraa’elii fi Isiraa’el qofaaf kenname ture Ba’u Isaan daalatanis amantootaa fi waldoota kiristaanaa akka eeganiif ramadaniru. Filannoon Isiraa’el kophumatti kan Waaqayyooti.
Inni diina Waaqayyoo, saba Waaqayyoo, fi ummata hundaati. Dhagna Sadan Waaqaa keessaa inni jalqabaa Abbaadha. Macaafni Quqlulluun walitti dhufeenya karaa baratame qofaa hin taane in jajjabeessa, walitti dhufeenyi inni baratamaan ergama waliini tokkollee sadarkaa Macaafa Qulqulluutiin waldaa kiristaanaa naannoo guutummaatti barsisuu danda’u miti. Namoonni hundumtuu cubbuu in qaba-nuyillee, warri kan Gooftaa taane in ,acaafa.
Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara, qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif in eebbifama. Macqafa in Why We Believe in Creation: Ergamoonni qulqulloonni hundumtuu iddoo Waaqayyo bara-baraaf jiraatu hunda in jiraatu Ibroota Gareen Phaawulos ergama isaannii sirriitti hubatanii turan: Ergamaan Jihoovaa, maarree, Kiristoos bara-baraa Mataa Isaa ture.
Waraabbiiwwan kanneen Waaqayyo waamu qulqulleessuu irratti yommuu isaan qooda fudhatan argisiisu. Yachid jecha Ibraayisxii isa yeruma hundaa tokkichummaa ibsa.
Kakichi har’allee sababoota asiin gadiitiin hojiirra oolaa akka jiru beekna: Ol-butamuun battalatti, hamma liphisuu ijaa yommuu ta’u, yerichatti dhagnoonni keenya, kanneen amma dadhabootaa fi dhukkuba, du’aafi tortoruudhaaf sababa ta’an, yeros kan hin dadhabne, humnaan kan guutamaniif kan hin duune in ta’u 1Qorontos Since you’ve already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review.
Tokkoffaa addaddummaa waggaa torbaa fi ji’a saddeetii fi sa’atii kudhanii qaba. Ifumatti, Dhagnoonin sadan adda baafaman, Ilmii Inni cuuphamee ture, Hafuurri, fi Abbaan, Inni sagaleen Isaa Waaqa irraa dubbate, kana qulqulluk as in jiru. Akka Abbummaa dhala namaatti, Ilma Isaa cubbuu isaaniitiif aarsaa gochuu fi kennaa fayyinaa itti fufeenyaan kennuuf fedhiiwwan hafuuraa isaa kenneera Yoh.
Dandeettii sammuu waan hunda qabuu: Aboon Wangeelota Maatewos